Nnwom 34 NA-TWI - De kamfo Onyankopɔn papayɛ - Mɛda - Bible Gateway
Nnwom 33Nnwom 35
Nnwom 34 Nkwa Asem (NA-TWI)
34 Mɛda Awurade ase daa! Merennyae no kamfo da. 2 Mɛkamfo no wɔ nea wayɛ ama me no ho. Wɔn a wɔhyɛ wɔn so nyinaa ntie na wɔn ani nnye! 3 Mo ne me nkamfo Awurade kɛseyɛ; momma yɛmmom nkamfo ne din!